Dhaawacyada qaraxii Ex-koontarool oo Turkiga loo qaaday - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Dhaawacyada qaraxii Ex-koontarool oo Turkiga loo qaaday
December 29, 2019 Duceysane451
Diyaarad milateri nooca caafimaadka ah oo ay soo dirtay dowladda Turkiga ayaa xilligan la saarayaa dhaawacyada qaar ka mid ah dadkii shalay waxyeellada ka soo gaartay qaraxii weynaa ee ka dhacay Ex Koontarool Afgooye.
Tobaneeyo ruux oo la sheegay in dhaawacyadooda halis yihiin ayaa goor dhow la saaray diyaaradda ay soo dirtay dowladda Turkiga, waxaana la filayaa in goor dhow ay ka duusho garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo Safiirka Turkiga u qaabilsan Soomaaliya Mehmet Yilmaz ayaa ku sugan garoonka Muqdisho, si ay u sagootiyaan dhaawacyada halista ah ee loo qaadayo dalka Turkiga.
Wararka ayaa sheegaya in dhaawacyadan la geyn doono isbitaalo ku yaalla magaalada Ankara ee Caasimadda Turkiga, si loogu daweeyo, waxaana dhaawacyada yihiin kuwo dalka wax looga qaban waayay.
Dowladda Turkiga ayaa diyaarad kuwa caafimaadka ah u soo dirtay Muqdisho, taasoo saaka soo caga dhigatay, waxaana diyaaraddan siday daawooyin iyo dhaqaatiir ka qeyb qaadanaya howlaha gurmadka iyo la tacaalida dhaawacyada ee ku jira Isbitaalka Erdogan Ex Digfeer.
Wajiga 2aad ee dhismaha garoonka diyaaradaha cadaado oo maanta la bilaabay
February 4, 2020 Duceysane